सांसद 'अथक'को पहलमा बिनौनाबासीको बिजुली बाल्ने सपना पुरा
सांसद ‘अथक’को पहलमा बिनौनाबासीको बिजुली बाल्ने सपना पुरा
बाँके। जिल्लाको राप्ती सोनारी गाउँपालिका-५ बिनौनामा १३ वर्षदेखिको बिजुली बाल्ने सपना पुरा भएको छ। बाँके निर्वाचन क्षेत्र नं १ का सांसद महेश्वर गहतराज ‘अथक’को पहलमा बिनौनाबासीको बिजुली बाल्ने सपना पुरा भएको हो।
शनिवार ८० वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक हिर्दादेवी खड्काले बिजुली बालेर बिनौना उज्यालो कार्यक्रमको उद्घाटन गरेकी छन्। यससँगै राप्ती सोनारी गाउँपालिका केही वडा र नरैनापुर गाउँपालिकाका सबै वडाहरूमा बिजुली बलेको छ। उक्त क्षेत्रमा बिजुली बाल्न सांसद अथकले निरन्तर रूपमा विद्युत् प्राधिकरणको क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगन्ज, केन्द्रीय कार्यालय, विद्युत् विकास विभाग र ऊर्जा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेका थिए।
प्रसारण लाइन बिस्तारका क्रममा देखिएका कानूनी समस्याको समाधानका लागि उनले जिल्ला बन कार्यालय बाँके, बन विभाग र बन मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरेका थिए। उनले बिनौनामा बिजुली बाल्नको लागि ठुलो मेहनत गर्नु परेको सुनाए। सोही अवसरमा सांसद अथकले आफ्नो निरन्तरको पहल र यहाँका बासिँदाको जागरूकताका कारण आज बिजुली बाल्न सफल भएको बताए। उनले भनेका छन्, ‘यो हाम्रो ऐतिहासिक सफलता हो।’
बिजुली बलेसँगै अब यहाँका किसानले विभिन्न उद्योग कृषि, पशुपालन तथा अन्य लाभ लिन सक्नु पर्ने उनले बताए। संविधान दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै सांसद अथकले संविधान एक गतिशील दस्ताबेज भएकोले जनताको आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन र परिमार्जन गरिने बताए। संविधानमा सबैको भावना समेट्न आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्न सकिने उनले स्पष्ट पारे। संविधानले चाहेको स्थिरता, स्थायित्वका लागि नेपालका सबै राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनु पर्ने चर्चासमेत उनले गरे।
कैलालीमा रासायनिक मलको अभाव
‘अमृत बेचेर जहर खाने गाउँ’मा प्रहरी चौकी बनेपछि…
सञ्चार संस्थासँग सहकार्य गर्छुः मन्त्री गुरुङ
‛सामाजिक शसक्तिकरणको क्षेत्रमा महानगरले योजनाबद्ध ढंगले काम अगाडि बढाएको छ’
राष्ट्रपतिको दुई महिनाको तलब र चाडवाड खर्च कोरोना कोषमा
जसपाले गठन गर्‍यो समायोजन कार्यदल, क-कसले पाए जिम्मेवारी ?
२३ किलो चरेससहित एक महिला पक्राउ
पुनर्निर्मित रानीपोखरीको राष्‍ट्रपतिबाट उद्घाटन
सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो, आजको भाउ कति ?
कोरोनाको उपचार नगर्ने निर्णय पैसाको अभावले गरिएको होइनः डा. बाबुराम भट्टराई
विप्लव नेकपाद्वारा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक
युवराज खतिवडाविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा तीन उजुरी
पर्सामा अनेरास्ववियूकाे एकता टुंगियो
नेकपा सांसदको दसैं भत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय
मार्क्सवादी दृष्टिमा दशैं
बडादशैंको आज चौथो दिन, कुष्माण्डा भगवतीको पूजा गरिँदै
उपचार नपाउँदा मौलिक हक हनन, सरकारी अस्पतालले कोरोना संक्रमितसँग माग्न थाले पैसा
नियमित कफी पिउनुका फाइदा